Ndị kasị mma emulators maka Utu Pi | Akụrụngwa n'efu
Ndị kacha mma emulators maka Pip Pi
Enwere otutu Fans nke ochie ma ọ bụ egwuregwu kpochapụwo. Ndị na-egwu egwuregwu ndị bi n'oge ọla edo nke consoles vidiyo dị ka Atari, ma ọ bụ egwuregwu arcade bartop site na arcades na ụlọ mmanya, ma ọ bụ ndị jikwala kọmpụta akụkọ ihe mere eme dịka Commodore64, Spectrum, wdg, ga-anọgide na-enwe ahụhụ iji . emulators ịtụte ndị a kpara video egwuregwu.
Ọbụlagodi na ibighị n'oge ndị ahụ, mana ị nwere mmasị na ntụrụndụ dijitalụ, ị kwesịrị ịma na site na Raspberry Pi ị nwere ike ịmepụta ime ụlọ egwuregwu, ihe omuma ulo ma dị oke ọnụ ala. Ọ bụrụgodị na ị bụ onye na-eme ihe na-amasị gị N'onwe Gị, ị nwere ike ịme okwu na-adọrọ mmasị iji kọwaa kọmputa ndị a, njikwa ma ọ bụ igwe nke oge gara aga ...
1 Akụrụngwa: Rasberi Pi agbanweela ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa
2 Sọftụwia: Emulators
2.1 Ndị kacha mma emulators maka Raspberry Pi
2.1.4 Nnenna Onwuka
2.1.6 Ikwu Ikwu
2.1.9 Oru (vasatail Commodore emulator)
2.2 Ihe ndi ozo
Akụrụngwa: Rasberi Pi agbanweela ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa
Rasberi Pi abịala maka gbanwee mpaghara nke agụmakwụkwọ, Mee N'onwe Gị, na kwa nke igwu egwu egwu. Na obere SBC ị nwere ike ichikota otu ma ọ bụ karịa igwe eji egwu egwu na ụzọ dị mfe. Fọdụ n'ime ike nke Pi ma e jiri ya tụnyere kọmpụta kọmputa ndị a bụ:
Ọnụ ego dị ọnụ ala: Rasberi Pi dị ọnụ ala, n'ihi na ihe karịrị € 30 ị nwere ike ịzụta otu n'ime mbadamba ndị a, yana ị nwere obere ịzụta ihe ndị ọzọ dịka kaadị SD ebe ị nwere ike ịchekwa sistemụ arụmọrụ ị ga-arụ ma ndị emulators, egwuregwu vidio, mmemme, wdg. Enwere ọtụtụ ngwa ngwa zuru oke ị nwere ike ịzụta dị ọnụ ala ma na-etinyeworị ihe niile ịchọrọ iji mepụta igwe pinball gị, igwe arcade igwe, ma ọ bụ ihe njikwa azụ ...
Utu Pi 4 Model B - B07TD42S27
Utu Pi 3 Model B - B01CD5VC92
Akụrụngwa Pi Pi Pi - B07ZV9C6QF
BarTop oyiri Arcade Machine na Pi - B0813WHVMK
JAMMA na ndị ọkwọ ụgbọala dị: n'ahịa ị ga-ahụkwa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-achịkwa nke na-e imitateomi ndị nke consoles nke oge gara aga, dị ka Nintendo's NES, ma ọ bụ ikpe na ngwa na-enye gị ohere ịmepụta obere njikwa na ụzọ dị mfe. Ọnụahịa ha dị ọnụ ala, ha na-agbakọta n'ụzọ dị mfe ekele maka GP nke Pi nwere maka ọrụ ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka ịmechaa usoro egwuregwu vidiyo gị.
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu maka Pi - B07TB3JTM2
Ọystụ na bọtịnụ bọtịnụ maka Arcade Machine na Pi - B07315PX4F
iNNEXT retro njikwa ụdị Nintendo64 maka Pi - B075SYJTF7
iNNEXT 2 Classic SNES Controllers maka Pi - B01EA7MVTQ
EG amalite Arcade joysticks na bọtịnụ kit - B07B66W25M
EG malitere 2 arcade joysticks na bọtịnụ kit - B01N43N0JB
Ihuenyo ịhọrọ: ihuenyo, ọ bụ ezie na ochie CRTs adịghị, ọ bụkwa ihe ọzọ ị nwere ike ịzụta ọnụ ala ma họrọ akụkụ o kwesịrị inwe. Enwekwara mmetụ ihu aka nke ezubere maka Raspi, ọ bụ ezie na nke ndị emulators na egwuregwu ochie anaghị adabara. Ọ dị mma iji otu n'ime IPS LCD ihuenyo ha na-ere maka SBC a. Ma ọ bụ ọbụna jikọọ hob gị na TV ụlọ ma ọ bụ nyochaa, dabere na nsonaazụ ikpeazụ ịchọrọ inweta.
4.3 ”Mgbawa Ngosipụta Pi TFT - B07FD94BQW
3.5 ”Ihuenyo mmetụ maka Pipi PI - B07Y19QQK8
Ulardị na mgbanwe: na mgbakwunye na ihe niile dị n'elu, ị nwere ike ịhọrọ ihe ịchọrọ ịgbakwunye na igwe ntụrụndụ gị, ụdị ụlọ ịchọrọ itinye na ya (bipụta ya na 3D, mee ya nke osisi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, tee ya, zụta ya ugbua,…), họrọ akụkụ nke ihuenyo ahụ, ụdị njikwa ị ga-eji, wdg.
Ochie na ihe nkedo Nintendo NES maka Pi - B0787SZXMF
Waveshare okpu maka Pi iji mepụta obere ihe njikwa - B07G57BC3R
Waveshare kit iji mepụta GamePi nke gị - B07XHQMNPC
Okpu Waveshare maka Portable Console Pi - B07PHZ1QNZ
Na na na-enweghị ichefu na ị nwere ike jikọta ike nke Rasberi Pi na ọrụ ndị ọzọ free ngwaike dị ka Arduino, yana otutu okpu, ngwa ndị ọzọ, wdg.
E wezụga na ngwaike, na- ị chọrọ software na-enwe ike na-agba ọsọ na video egwuregwu ochie na Rasberi Pi gị, dị ka ọtụtụ n'ime egwuregwu ndị ahụ e kere eke mepụtara maka nyiwe na igwe dị iche na ụlọ Pi. N'ihi na ị chọrọ emulators kpomkwem.
Ikwesighi ighota ihe bu emulator na simulator. Ha abụghị otu ihe ahụ, ọ bụghịkwa oyi akwa ndakọrịta. Dịka ọmụmaatụ, na ụwa n'ezie ị nwere ọtụtụ ihe atụ nke ụdị ndị a niile, dị ka QEMU dị ka emulator, egwuregwu F1 2017 dị ka ihe eji egwu ụgbọ, na WINE dị ka oyi akwa ndakọrịta.
Un simulador Ọ bụ sistemụ etinyere na ngwaike ma ọ bụ ngwanrọ nke raara onwe ya nye iji mepụta gburugburu ma ọ bụ mepụta omume nke ezigbo usoro. Ihe na-enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na emulator, ebe ọ bụ na emulator bụ mmemme ngwanrọ nke na-anwa ịme egwuregwu vidiyo ma ọ bụ mmemme na-eche na ọ na-agba ọsọ na ikpo okwu.
Echere m emulators mejuputa ngwaike na sistemụ nrụọrụ nke akụrụngwa nke ha bu n'obi i softwareomi nke mere na sọftụwia nke ala maka ikpo okwu a nwere ike ịgba ọsọ na ezigbo ngwaike na sistemụ. Dịka ọmụmaatụ, ngwaike na sistemụ nke dị na Atari 2600, ma ọ bụ na ụdịdị dị iche iche, enweghị obere ihe gbasara ngwaike ARM nke Raspberry Pi.
Kama nke ahụ, site na ndị a emulators a na-eme oyi akwa na "Tugharia" ntuziaka na oku ka usoro dị mkpa iji na-agba ọsọ egwuregwu nke mere na ọ ga-agba ọsọ na gị Pi dị ka ọ bụrụ na ọ bụ nwa afọ igwe. Maka nke ahụ, emulator kwesịrị iweghachi omume nke CPU, ebe nchekwa, M / O, wdg, nke njikwa, kọmputa, ma ọ bụ igwe eji eme ihe.
Ndị kacha mma emulators maka Raspberry Pi
N'ime ndị emulators dị maka Rasberi Pi na nke ị nwere ike iji mee egwuregwu vidiyo na ROM nke ibudata, ha nwere ike ịpụ iche ụfọdụ na-akpali nnọọ mmasị dị ka:
Ọ bụ otu n'ime usoro zuru oke kachasị amasị n'ihi na ndị hụrụ ochie egwuregwu. Ọ dakọtara na utu Pi, Odroid, na nyiwe ndị ọzọ. Ọ dabere na Raspbian, ma na-ewulite ọdụ nnomi zuru oke ka ị nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu kachasị amasị gị, ị tinyelarị ya niile yana ọtụtụ nhazi na ngwa nrụpụta.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere akwado emulators, ị nwere Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Jaguar, Atari Lynx, Atari ST, Atari STE, Atari TT, Atari Falcon, Commodore 64, Commodore VIC-20, Commodore PET, Dragon 32, FinalBurn Neo, Famicom, GameCube, Game Gear, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Macintosh, MAME, Sega SD, MegaDrive, NeoGeo, NeoGeo Pocket, Nintendo 64, Nintendo DS, NES, SNES, DOS, PlayStation M, PlayStation 2, PSP, Sega 32X, Nintendo Wii, ZX-81, ZX ụdịdị dị iche iche, wdg.
Lakka Ọ bụ sistemụ zuru oke nke gụnyere ihe niile ịchọrọ maka egwuregwu ịkegharị na nke dakọtara na bọmbụ Pi. Nke a fechaa Linux distro nwere a dị mfe na enyi na enyi interface na bụ ngwa ngwa. N'ime ndị emulators ị nwere ike ịnụ ụtọ bụ nke Sega, Nintendo NES, SNES, Game Boy, PlayStation, PSP, Atari 7800, Atari 2600, Jaguar na Lynx, Game Boy Advance, Game Boy Color, MegaDrive, NeoGeo, Nintendo 3DS, Nintendo 64, Nintendo DS, wdg.
RecalBox Ọ bụ ihe zuru ezu usoro nke mere na ị nwere oké multimedia na ntụrụndụ center niile na otu. Ọ bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na nke ndị gara aga, ebe ọ bụ na mgbakwunye na gburugburu ebe obibi na ndị emulators maka egwuregwu vidio, ọ gụnyere usoro zuru ezu iji mejuputa onye ogbugbo. Yabụ, ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ Rasberi Pi na ụlọ obibi TV gị.
N'etiti lndị emulators na-agụnye Site na ndabara, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ egwuregwu ochie maka NES, SuperNintendo, Master Master, PlayStation 1, Jenesis, GameBoy, Game Boy Advance, Atari 7800, Game Boy Color, Atari 2600, Sega SG1000, Nintendo 64, Sega 32X, Sega CD, Lynx, NeoGeo, NeoGeo Pocket Color, Amstrad CPC, Sinclair ZX81, Atari ST, Sinclair ZX Spectrum, DreamCast, PSP, Commodore 64, wdg.
Nnenna Onwuka bụ oru ngo nke na-arụ ọrụ sistemụ pụrụ iche na nyochagharị. Ọ dakọtara na Rasberi Pi yana yana SBC ndị ọzọ yiri Odroid.
Usoro a zuru ezu na-agbakọ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke emulators, na-eme ka ọ bụrụ ụzọ dị mma zuru oke na nke abụọ gara aga. Ọ ga - enyere gị aka ịgba ọsọ egwuregwu site na Nintendo 3DS, Commodore Amiga, Amiga CD32, Amiga CDTV, Amstrad CPC, Apple II, Atari (2600, 5200, 7800, 800, ST, Lynx, Jaguar,), Atomiswave, Commodore 128, Commodore VIC- 20, Commodore 64, DOS, Sega DreamCast, Nintendo Game Cube, Gambe Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega Game Gear, Amstrad GX4000, MAME, Sega Megadrive, Nintendo 64, Nintendo DS, NeoGeo, NES, PlayStation 2, Sony PSP, PlayStation 1, SNES, ZXSpectrum, Nintendo Wii, wdg.
Ọ bụ emulator dị mfe maka sistemụ arụmọrụ MS-DOS nke mere na ị nwere ike ịghachite executables nke kpochapụwo omume na video egwuregwu na a n'elu ikpo okwu. Awụnyere ya dịka ngwungwu ọ bụla sitere na nchekwa nke nkesa gị maka Pi. Ozugbo arụnyere na ọ dị mfe iji na ole na ole iwu dị mfe ị nwere ike ịgba ọsọ asụsụ nke ngwanrọ nke ochie a.
Ikwu Ikwu bụ ihe ọzọ Eltechs Software emulator e kere iji nwee ike ịgba ọsọ sọftụwia dịka egwuregwu vidiyo na nyiwe dabeere na x86. Ọ bụ oru ngo a kwụrụ ụgwọ, mana ọ na-enye gị ohere ihe dị mma ma dịkwa mfe karịa iji QEMU iji rụọ sọftụwia ejikọtaghị maka ARM na SoCs nke Raspberry Pi.
Ọ bụ ihe na-emeghe iyi mmejuputa iwu maka Linux ga-ekwe ka ị na-enwe riri ahụ na ọtụtụ video egwuregwu nke NeoGeo a ma ama. Ọ na-adị mfe arụnyere na ị pụrụ ịnụ ụtọ ọdịnaya ngwa ngwa. Na isiokwu dị ka Mega Slug, SpinMaster, Blue's Journey, Street Hoop, Blazing Star, NAM-1975, Art of Fighting 2, wdg.
Yana Commodore, uzo ozo a na-ekwu okwu ya ndị a ma ama. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye egwuregwu vidiyo ndụ nke abụọ maka otu akụkọ ihe mere eme a, ịnwere ike iji emulator ZXBaremulator nke na-ewetara gị emulator zuru ezu-emulator (mmemme nke anaghị achọ sistemụ arụmọrụ iji rụọ ọrụ) maka Raspberry Pi. Ọ na-e emomi Zilog Z80 na ụlọ nke igwe ndị a ka ha dakọtara na ZX Spectrum 48K, 128K na + 2A.
Oru (vasatail Commodore emulator)
OZI ma ọ bụ Combian64 Ọ bụ otu n'ime ndị emulators kachasị eme nke ọma, ebe ọ nwere ike ịgba ọsọ n'ọtụtụ nyiwe, gụnyere Raspberry Pi gị iji mejuputa emulator zuru oke maka ama C64, C64DTV, C128, VIC20 na PET niile, yana PLUS4 na CBM-II. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtụte ngwanrọ nke ikpo okwu a, yana egwuregwu vidiyo ya, ị ga-achọ emulator a ...
Ọ bụ ngwaọrụ ọzọ ị nwere ike iwunye na gị Raspbian maka utu Pi na njikwa ngwugwu. Ozugbo arụnyere, na-eji njikwa ị nwere ike ịgba ọsọ ROM gị n'ụzọ dị mfe, ọ bụ ezie na ịnweghị GUI ọ nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ na-adighi adọrọ mma maka ndị mbido.
Ọzọ nke emulators maka Atari na inwere n'aka gi bu oru Atari ++. N'okwu a, ọ bụ ọrụ dabere na Unix na ebumnuche iji wetara gị ihe nkasi obi dị ka Atari 400, 400XL, 800, 800XL, 130XE, ma ọ bụ 5200. Na mgbakwunye, ọ na-ahazi onwe ya iji kpokọta ya maka ikpo okwu gị, na-enye gị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ.
Ọ bụ ihe ọzọ dị mma emulator nke na-arụ ọrụ na utu Pi, n'agbanyeghị akwadoghi maka newbies. Ọ chọrọ ntọala na usoro usoro nke nwere ike ịbụ ntakịrị aghụghọ maka ndị na-enweghị uche.
Ihe oru ngo na-ebilite dị ka a API Libretro, a n'ihu-ọgwụgwụ maka emulators na ochie egwuregwu na nke ọ ga-ekwe ka ị na-agba ọsọ ndị a video egwuregwu ...
Ọ bụrụ na ịchọrọ budata egwuregwu vidio, enwere ụfọdụ weebụsaịtị mara mma ị kwesịrị ịma. Buru n'uche na emulators bụ kpam kpam iwu, ma usoro maka otu ị ga-esi nweta ROMs maka egwuregwu vidio nwere ike ọ gaghị abụ. Enwere ike ịchọta egwuregwu ụfọdụ n'efu, ndị ọzọ kama ị ga-akwụ ụgwọ maka ha ma ọ bụ mee ka ha pụọ. Mana nke a bụ ọrụ gị, ebe ọ bụ na HardLibre anaghị akwado ịpụpụ ụdị sọftụwia ọ bụla.
N'etiti ụfọdụ weebụsaịtị ebe a ga-ahụ ụdị egwuregwu egwuregwu ROM ndị a na ROMM na-adụ gị ọdụ ka ị tụlee ihe ndị a:
Egwuregwu Omuma RGB
Ha agaghị eme
M na-adụ gị ọdụ ka ị lee anya na ebe nrụọrụ weebụ ịntanetị, a nnukwu Archive niile gara aga nke netwọk nke netwọk ebe ị ga-ahụ na ozi na-gwa na kwa ọtụtụ ndị ọzọ ochie omume na egwuregwu vidio.
Enwere m olileanya na ihe niile a ị nwere ike zuru ezu maka ọdịnihu gị retro vidiyo egwuregwu igwe ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Ndị kacha mma emulators maka Pip Pi
Ezigbo nkuzi, m na-elele ihe eji eme ihe eji eme ihe, nkuzi na akụrụngwa iji mee igwe arcade n'onwe m, mana achọtara m ụlọ ọrụ na-arụpụta ha ma ọ ga-adịrị m mfe karị ịzụta n'aka ha. Ekwadoro m na ọ bụrụ na ọ dị gị ka m, ịzụrụ igwe eji agba ọsọ na-ebu ha niile ma ọ bụrụ na ịchọta ezigbo onye nrụpụta ị nwere ike ịnwe ya maka ezigbo ọnụ ahịa yana ezigbo mma. Azụrụ m nke m na MERCAPIXELS ma ana m akwado ha 100%. M hapụrụ gị njikọ ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile anya, ha nwere nnukwu igwe na ọnụahịa obi ọjọọ. http://www.mercapixels.com
Arduino Mega: ihe niile gbasara nnukwu ụlọ mmepe
Arduino UNO- N'enye free ngwaike osisi Doppler